ကတ္တရာစေးအရည်ပျော်စက်-WUXI XUETAO GROUP CO., LTD.@en.cxtcmplant.com
ထူးခြားတဲ့အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကက်ဘိနက်, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနဲ့ရွေ့လျား။ အပူကွိုင်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော် layout ကိုအပူချိန်တိုးအစာရှောင်ခြင်းစေသည်။ ဒါဟာအထူး slag ဥတု function ကိုရိုးရှင်းစစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရှိပါတယ်။
Fob စျေးနှုန်း: ညှိနှိုင်းမှု
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 40-50 အစုံ / လ
Mini ကိုအရေအတွက်: 1set
အင်္ဂါရပ်များ: အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကက်ဘိနက်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထူးခြားသော, လွယ်ကူသော installation နဲ့ရွေ့လျား။ အပူကွိုင်၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော် layout ကိုအပူချိန်တိုးအစာရှောင်ခြင်းစေသည်။ ဒါဟာအထူး slag ဥတု function ကိုရိုးရှင်းစစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရှိပါတယ်။
Applications ကို: အမြန်အပူမှအစိုင်အခဲဆရာဆရာမတွေကခေါင်းထဲရိုက်ကတ္တရာစေး
Marketing ကိုဧရိယာ: ရုရှား, ကာဇက်စတန်, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ, အယ်လ်ဂျီးရီးယား, မလေးရှား, ဘရူနိုင်း, ပိုလန်, သီရိလင်္ကာ, အင်ဒိုနီးရှား, ကွန်ဂို, ဂါနာ, etc
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: c.com မှစ. ကုန်ပစ္စည်းများ【ပစ္စည်းကိရိယာများအရည်ပျော်ဆရာဆရာမတွေကခေါင်းထဲရိုက်ကတ္တရာစေး】, လက်ကားအမျိုးမျိုးသော High Quality 【ပစ္စည်းကိရိယာများအရည်ပျော်ဆရာဆရာမတွေကခေါင်းထဲရိုက်ကတ္တရာစေး】ပေးသွင်းခြင်းနှင့်စက်ရုံ【ပစ္စည်းကိရိယာများအရည်ပျော်ဆရာဆရာမတွေကခေါင်းထဲရိုက်ကတ္တရာစေး】【ပစ္စည်းကိရိယာများအရည်ပျော်ကတ္တရာစေးဆရာဆရာမတွေကခေါင်းထဲရိုက်】။
အကြီးစား-size ကိုစိတျအပိုငျးရှင်းလင်းသောကုန်တင်ဖြစ်ကြသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းသစ်သားအမှုပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများလမ်းနှင့်ပင်လယ်တင်ပို့များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
Output t/h Power
kw Drums/ batch
(φ500) Drum Loading Volume
M3 Heating Area
㎡ Heat Transfer Oil Temp.
TD-10 2.5312 8 10 80 240
TD-2055 24 19 20 115 240
TD-30 7.5 8 32 25 27 153 240